Iwaranti yethu - UJesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Yonke imikhiqizo edayiswa yiChina-Flag-Makers ifaneleke ukuba yikhwalithi ephezulu futhi ithunyelwe ngesikhathi esifushane kakhulu. Uma kwenzeka noma yini engalungile, sizobhekana nayo ngasikhathi sinye futhi sinciphise ukulahleka ngangokunokwenzeka.
Ukuphrinta Okuqinisekiswe Ngekhwalithi
Izimangalo zewaranti yase-China-Flag-Makers zifaka, kepha azikhawulelwe ku:
Ayikwazi ukulandela imiyalelo yenhlangano, amanothi noma ukunakwa okunamathiselwe
Ukuguga okujwayelekile kwezimpahla, kufaka phakathi i-hardware nokuphrinta
Ukusetshenziswa kabi nokuguqulwa okungagunyaziwe kwemikhiqizo
Ukulimala kwezinhlekelele zemvelo, njengezivunguvungu, imimoya enamandla nesiphepho esinamandla
Ukukhishwa kwekhwalithi yokuphrinta noma i-Hardware engathengiswanga noma engakhiqizwa yi-China-Flag-Makers
I-China-Flag-Makers iyaligodla ilungelo lokwenza isinqumo sokugcina kunoma yiziphi izingxabano zewaranti, okubandakanya ukunqunywa kokugcina kwesizathu kanye nesibopho somonakalo kanye nokunqunywa kokugcina kwesixazululo sempendulo kanye nempendulo.
Iwaranti Yesikhathi Esilinganiselwe Yokuphila
Isikhathi sokuphila somkhiqizo sincike ekusetshenzisweni kwangempela, yonke imikhiqizo yokuphrinta eyenziwe yi-China-Flag-Makers inesikhathi sewaranti.
Isikhathi sewaranti sayo yonke i-hardware, izesekeli nemidwebo ingunyaka owodwa. Uma umkhiqizo wonakaliswe izinto ezingezona ezabantu kungakapheli unyaka owodwa, imikhiqizo ingashintshwa. Uyacelwa ukuthi ubheke ukuthi ngabe i-hardware, izesekeli kanye nemidwebo isesimeni esihle kuqala ngemuva kokuthola umkhiqizo. Uma izinkinga zekhwalithi zivela zingakapheli izinsuku ezi-5 ngemuva kokuthola umkhiqizo, sizomiselela umkhiqizo mahhala futhi senze imali yokuthumela. Uma izinkinga zekhwalithi ziphakama ngemuva kwezinsuku eziyi-5 ngemuva kokuthola umkhiqizo, sizowubuyisela mahhala umkhiqizo, kepha ngeke senze imali yokuthumela.
Uma inkinga yekhwalithi itholakele lapho uthola imikhiqizo, okokuqala sicela uhlole ukuthi ibhokisi langaphandle lilimele noma cha. Uma kukhona umonakalo ebhokisini elingaphandle, sicela uthathe izithombe zebhokisi elonakele nemikhiqizo ngesikhathi. Uma ibhokisi elingaphandle lingonakalanga, sicela uthathe izithombe zemikhiqizo eyonakele. Sicela uthumele impikiswano enencazelo yenkinga nezithombe zayo yonke imikhiqizo eyonakele lapho uthola imikhiqizo futhi uthola umonakalo. Ngemuva kokuthola izithombe ezihlobene nezinkinga zekhwalithi, sizokwenza isinxephezelo ngemikhiqizo eyonakele ngemuva kokuqinisekiswa.
Asikwamukeli ukubuya nokushintshana lapho umbala womfanekiso usufiphele ngenxa yokusebenzisa isikhathi eside.
Sicela ungasebenzisi amatende esimweni sezulu esibi kakhulu, njengemvula enamandla nomoya, ngaphandle kwalokho, angalimala.
Siyazi ukuthi ikhwalithi ingaphezulu kwebhizinisi elikhanyayo, ngakho-ke silithatha ngokungathi sína. Siyathembisa uma kwenzeka noma iyiphi inkinga, NGEKE sidlulise imali.
Sigxilisa ukubaluleka okukhulu kwinsizakalo eseyithengisiwe, ngakho-ke sicela uxhumane nabamele abahlinzeka ngamakhasimende okokuqala ngqa, sizothola isisombululo esihle kakhulu esinciphisa ukulahleka ngesikhathi esifushane.